Kusvikira vateereri chaipo evanhu vezvenhau haichisiri nezve hunyanzvi. Nhasi uno mutambo kubhadhara-kutamba. Nemapulatifomu akagurika, organic kusvika kune mabhizinesi kwave kutora nosedive. Izvo hazvireve kuti mabhizinesi anofanira kukanda mapfumo pasi pa 2.6 mabhiriyoni vanhu vanoshandira pasocial media pasi rese. Iwe unogona kupa vatengi mukana wekudyidzana nemhando yako pane zvirevo zvavo uchishandisa kushambadzira munhau.
Sarudzo dzekushambadzira dzinosiyana nepuratifomu. Usati watanga mushandirapamwe, dzidza nezvekushambadzira sarudzo, mitengo, uye kushanda kwevatambi vashanu vakanyanya munhau dzemagariro.
Kubva Facebook yakachinja algorithm yayo kuisa pamberi pekudyidzana pakati pemhuri neshamwari, mabhizinesi ari kutendeukira kushambadziro kupfuura zvakamboitika.
Facebook ine kusvika pamwedzi kwe mabhiriyoni maviri vashandisi uye vanounganidza data rakawanda pamusoro pehuwandu hwevanhu, zvavanofarira, uye maitiro. Iyo yakanakisa puratifomu yekutanga yemagariro midhiya kushambadzira mushandirapamwe.
Hazvishamisi kuti iyo social media giidhi inopa wakawanda ad ad sarudzo.
Mapikicha nemavhidhiyo ekushambadzira anoonekwa muma feed evashandisi uye ndiye anozivikanwa kwazvo. Pakati pezvishambiso izvi, unogona kusarudza kuwedzera zvakasiyana neKutora, Carousel, kana Slideshow mafomati.
Kuunganidza maposita kunoshanda sekitiketi yekutenga. Ivo vanoratidza seti yezvigadzirwa mune kushambadzira kumwe chete.
Carousel yezvinyorwa zvine kusvika kune 10 mifananidzo kana mavhidhiyo. Gadzira kugadzira neinopindirana inoteedzana yemifananidzo kana kuti-yekuitungamira.
Slideshow yezvinyorwa inokutendera iwe kuti ugadzire vhidhiyo pasina iyo nguva inodiwa yekupa film. Izvi zvinoshambadza zvinoregedza nekukasira, zvichiita kuti zvisvike kunyange kune vanoona pane inononoka Internet kubatana.
Panzvimbo yekusarudza fomati, iwe unogona zvakare kugadzira kushambadzira zvichienderana nezvinangwa. Facebook inopa kutungamira chizvarwa kushambadza, zvinopa (kana zvadzurwa), uye post yekuita musangano. Zvinangwa zvekushambadza zvinogona kuve zvakanangana nebasa reFacebook zvakare, sekuwedzera peji peji kana mhinduro yechiitiko.
Facebook yekushambadzira midhiya inoshandisa nzira yekutengesa, uko mabhizinesi anoda kugashira ad nzvimbo. Mari yacho inoenderana nemari yako yemazuva ese yekushambadzira uye huwandu hwemakwikwi evateereri vako.
Mazhinji mishambadziro yekuyera anoyerwa neCCC kana CPM. CPC kana mutengo pakubaya inongobhadharisa account yako kana mushanyi achidonha kushambadziro yako.
CPM inomirira mutengo pa1000 zvinoratidzwa, ine "M" inomiririra manhamba echiRoma e1000. Matsimba ndiyo nhamba yenguva iyo ad yako inoratidzwa. Iko kufungidzira hazvireve kuti mushandisi akaita musangano nezvako, chete kuti ivo vaive nemukana wekuzviona.
Maererano ne AdEspresso, CPC (mutengo pakudzvanya) paFacebook iri pedyo ne $ 0.27 nepo CPM (mutengo pa1000 impressions) iri $ 7.19 paavhareji.
Iwe unogona zvakare kufunga dzimwe nzira dzekutenga kushambadza pa Facebook. "Revha uye frequency" kushambadzira chinhu chitsva chisati chavepo kune vese vashandisi. Aya ma ads anofunga kuti vangani vanhu vaunoda kusvika uye kuti kangani kaunoda munhu kuti aone kushambadza kwako.
Kana iwe wakambotenga tV ad nzvimbo, iwe ungasarudza kutenga Facebook kushambadzira seTarget Rating Points (TRP). Pasi peTRP, unopihwa mutero mushure mekunge mushambadzi wako asvika kune vako
Facebook inogona kunge iine vateereri vakanyanya kutarisisa sarudzo pane chero imwe nzvimbo. Kuvavarira kugona kunowira mumapoka matatu:
Core (kureva demographics, zvido, maitiro)
Tsika (kubva pamazita ako)
Chitarisiko (chakafanana nevateereri vako varipo)
Core sarudzo dzinotangira kubva kunzvimbo nenzvimbo mafirimu aunofarira. Chekutarisirwa kunongedza kunoita kuti iwe ugone kurongedza runyorwa rwekutaurirana kana CRM (vatengi hukama hwekutarisira) data kuti uwane yako inotungamira pane Facebook. Chitarisiko chinofanana ne bhizimusi rako nevashandisi chakafanana nevateveri vako varipo.
Kushambadzira kwe Facebook kunopa hukuru hwepamusoro hunopihwa iyo saiti yakakura kusvika. Facebook inoramba iri yeti media media network uye imwe yeinonyanya kushambadzirwa mawebhusaiti epasi, kumashure kweGoogle neYouTube chete.
Nekushandurwa kwazvino, kubatanidzwa kwechiratidzo paFacebook kwakadzikira. Kushandisa kushambadza kunogona kuchengetedza bhizinesi rako pamberi pevateereri ve Facebook kunyangwe chikuva chichienderera mberi nekuchinja nekukura.
Iyi inoyemurika inoona zviri pamifananidzo. Nhepfenyuro yezvemagariro evanhu pa Instagram inofanira kutarisa pane zvemifananidzo uye kutaura nyaya.
Instagram ndeye Facebook uye inoshandisa iyo yakafanana ad management system. Iwe unogona kusarudza pakati pezvishambiso mafomu e Feid uye Nhau.
Izvi zvinoshambadza zvinoratidzika mune zvekushandisira kwemushandisi uye zvakada kufanana neyekutumirwa mazita. Sarudza kubva pamufananidzo, vhidhiyo, kana carousel mafomu.
Caption kusvika kune 2200 mavara
Mifananidzo kushambadzira ndiyo iri nyore kushandisa. Simbisa chinzvimbo chiripo icho chakatoita mushe mushe uye uchave nemukana wekuziva kuti izvo zvirimo zvinoenderana nevateereri vako.
Kusvika kune 60 masekondi
Landscape kana mraba fomu
Vhidhiyo inoramba ichizivikanwa uye inoenderera mberi ichikura pa Instagram. Ne IGTV uye ichangobva kuchinjwazve Discovery tab, sarudzo dzeAlvideo vhidhiyo dzinoramba dzichiwedzera. Mabhizinesi anogona kutarisira mamwe mavhidhiyo ad esarudzo mune ramangwana.
Swipe kuti utarise akawanda mifananidzo
Pakati pe2 kusvika kumakadhi e10
Makadhi anogona kuva mufananidzo kana vhidhiyo
Shambadziro dzeCarousel dzinoita kuti vashanyi vabatanidzane newe nezvakawanda zverefu pane mufananidzo mumwe kana vhidhiyo. Inzwa wakasununguka kugadzira uye utaure nyaya neyako carousel yezvinhu.
Shandisa mufananidzo kana vhidhiyo
Carousel sarudzo inowanikwa
Vertical kana chimiro chimiro
15 sec max yevhidhiyo
5 sec yemifananidzo
Zvinoenderana ne Instagram, mamiriyoni 400 maakaunzi anoshandisa Nhau zuva nezuva. Ichi chizere-skrini yezvinhu inotevedzera Snapchat uye inongogara uri online maawa e24.
Shambadziro dzenhau dzinosanganisira iyo isingatauri CTA (kudana-ku-kuita) iyo inobvunza vashandisi kuti vageze kana vafarira kuona zvimwe. Anotsigirwa maLCA enyaya kana ekudyisa kushambadzira anosanganisira:
Mari yekushambadzira yeAlion yakakwira zvishoma kupfuura Facebook uye zvinoenderana nerudzi rwezvishambiso nevateereri zvinonongedzwa. Zvimwe zvakadzama zvekutarisa zvinokwidza mitengo. Inofungidzira kuisa iyo yekutanga mitengo ye Instagram ad kutenderera $5 to $6.70 CPM.
AdEspresso inoona kuti iyovhareji CPC yeiyo Instagram feed ad mu2017 yaive $1.15, nepo Facebook adsfeed ads dzaive $ 0.50.
Instagram inopa zvakafanana kutarisisa zvekutarisa nzira se Facebook, zvinosanganisira:
Demographics (zera, murume nemukadzi, mutauro)
Kufarira (kusanganisira zvishandiso zvinoshandiswa uye vashandisi vanoteverwa)
Vateereri vetsika (vaunobata navo)
Kutaridzika kufanana nevateereri (akafanana nevatengi varipo)
Kunyangwe Instagram kushambadzira kwakanaka kupfuura mazhinji mapuratifomu, ivo vanogadzira mibairo. Vashandisi vanonyanya kuda kuita nema brands pa Instagram pane mamwe mafomu ezvemagariro vezvenhau, ne 80 muzana yevashandisi vanotevera kanenge kamwe chete mhando. Vashamwari vanazvo 2.5 nguva iyo yekudzvanya-kuburikidza neyakafanana nemamwe mapuratifomu.
Kana iwe uri kutarisa kutora diki demographic, Instagram inogona kunge iri nzvimbo yakanaka yekutanga.
Kana vateereri vako vari pa Twitter, kushambadzira inzira inoshanda yekuti vese vasvike vashandisi vatsva uye kuzadzisa zvinangwa zvakananga.
Zvishambadziro zveTwitter zvinotarisa pazvinangwa. Mabhizinesi anosarudza mushandirapamwe unobva pane zvido zvekuda, akadai se:
Webhusaiti kudhindwa, vateveri vatsva, uye maappula eapps anoshanda sePCC ads. Akaunti yako inongobhadharwa kana mushandisi akadhina kuenda kune webhusaiti yako, achikarova bhatani rekutevera pane peji rako, kana kuisa software yako.
Vashambadzi vekusvikira vanoyerwa neCMM. Kushambadzira kushambadzira kunosanganisira zvinoda, zvinopindurwa, uye kudzokorora kwezvako zvemukati.
Pane mafomu matatu ekusarudza kubva paTwitter:
Akasimudzira Tweets: Ordinary tweet inoratidzwa mune yevashandisi 'nguva
Akasimudzira Maakaunti: Akaunti yako yakaiswa mune yakatarwa yenguva, Ndiani Yekutevera mazano, kana yekutsvaga mhinduro
Akasimudzira Matambiro: Yako hashtag mune inoyerera misoro chikamu
Pasina maitiro echinyakare anosanganisira mavhidhiyo akakurudzirwa, mukati-mushamarari mavhidhiyo kushambadzira, akagadzirwa emojis, uye anosimudzirwa nguva kana slideshow yemagetsi yakabatana.
SaFacebook, Twitter inoshandisa dhizaini system paunokwikwidza kutarisana nevamwe vashambadziri vari kukwikwidza vateereri vamwe chete. Iwe unogona kusarudza mabheji nemaoko kana kuseta bhajeti yekuita otomatiki yekubhidha.
Twitter haizokubhadhara kusvikira mushandisi apedza chinogona kubhadharwa. Zviito zvinogoneka zvinoenderana nechinangwa chako. Kana chinangwa chako chiri mavhidhiyo ekuona, haungabhadhariswe kusvikira mumwe munhu aona vhidhiyo yako. Kana chinangwa chako chiri webhusaiti kudzvanya, kudzvanya ndicho chako chinobhadharwa chiito.
Iko hakuna mutengo wakaderera wekushambadza pa Twitter, asi iyo platform inokurudzira kutanga pa $ 30 pazuva kuona mhinduro.
Targeting sarudzo pane Twitter yakakura, kusanganisira:
Username / Muteveri
Twitter inoita kuti mabhizinesi atarise vateereri zvichibva pamazita anoteedzerwa. Kana iwe uchiziva kuti ndedzipi nhoroondo dzeTwitter dzinozivikanwa nevateereri vako, kutarisa kwemazita kunogona kubatsira kwazvo.
Yakagadzirirwa kana yetsika vateereri vanorega iwe ugadzire zvinyorwa zvichitsanangurwa kubva kune vashanyi vesaiti kana yeCRM data, ichikuchengetedza iwe muyedzo uye kukanganisa kunotora kuwana vateereri vako neyekushambadzira venhau.
Nekutarisa kwakasimba pane zvabuda, Shambadziro ye Twitter inopa zvinogona kufungidzira migumisiro uye inobvumidza iwe kugadzirisa yako mushandirapamwe yezvimwe zvinodiwa. Twitter inogona kunge isina kuwana kwe Facebook kana Instagram, asi kushambadzira kune vadiki, vanotarisa vateereri kunogona kuita chirongwa chinoshanda.
LinkedIn ndiyo inofanirwa-kuve neplatifomu yeB2B mabhizinesi. Chikamu chebasa-bhodhi, chikamu-tangazve, uye chikamu-chemaiti yekudyidzana network, LinkedIn ikozvino ine Vashandi vanosvika mamiriyoni e562 yakatenderera pamusoro penyika dze200.
LinkedIn yekushambadzira sarudzo inosanganisira inotsigirwa nezvayo, yakatsigirwa InMail, uye zvinyorwa zvemavara. Idzi sarudzo nhatu ndidzo dzinozvidzora pachadzo kuburikidza ne Campaign Manager interface.
Sarudzo yechina, shambadziro yesimba, inowanikwa maakaunti akachengetedzwa uye inosanganisira kushanda pamwe neakazvitsaurira LinkedIn timu kukwikwidza kushambadzira kwako.
Iyi ads inoratidza in mushandisi nhau. Ivo vanongoerekana vanoteerera vanopindura, saka vashandisi vanogona kuona kushambadzira kwako padesktop, nharembozha, kana iyo LinkedIn app.
InMail inokubvumira kuti ubatane nevashandisi imwe-pane-imwe kuburikidza ne LinkedIn's yakavakirwa-mutumwa. Iri basa rinoita kuti usvike kune vangangove vatengi vane nzira yakasarudzika.
Mavara ezviratidziro adiki, asiri-asina kusimba anovharirwa akaiswa mukona yekurudyi peji. Misoro inogumira kune 25 mavara uye tsananguro kune mavara e75. Vashandisi chete vanopinda saiti pane desktop vanoona zvinyorwa zvemavara.
LinkedIn mitengo inosiyana zvichienderana nebhajeti yako. Unogona kukwidza neCCC kana CPM uye uine matatu sarudzo yebhajeti: rakazara bhajeti, zuva nezuva bhajeti, uye wega wekubhadhara miganhu.
LinkedIn inotarisa kusangana kwebhizinesi kunodiwa nenzira kwayo, saka kutarisisa kunosanganisira indasitiri, saizi yekambani, basa kana musoro webasa, uye nzvimbo. Iyo saiti zvakare inopawo nhatu sarudzo dzekudzokorora vateereri varipo.
1. Webhusaiti zvekare
Tsvaga vashanyi vako webhusaiti paCopedIn uye segment zvichibva pamapeji avakashanyira. Kutanga, iwe uchafanirwa kuwedzera iyo LinkedIn Insight tag kune yako webhusaiti. LinkedIn's Campaign Manager ichachengetedza vatashanyi, vaunogona kukamura muzvikamu. Chikamu chega chega chinofanirwa kuve neinenge mamemba e300 kutanga kushambadza.
2. Bata uchidzokorora
Nokurumidza rodha yako yevanoridza runyorwa kuti usvike inozivikanwa inotungamira uye vatengi. LinkedIn inokurudzira kuumba rondedzero yeinenge 10,000 email yekuonana vasati vatanga shambadziro yekushambadzira.
3. Akaundi inodzokorora
Targeting neakaunti inoita kuti iwe usvike vashandisi kubva kune chaiwo makambani. Isa rondedzero yemazita ekambani uye mawebhusaiti uye LinkedIn inowana machetsi mukati meawa 48.
LinkedIn inopa rubatsiro kune vanoita sarudzo vane simba rakawanda rekushandisa kupfuura avhareji yepamhepo vateereri. Zvinoenderana neChinongedzoIn, vana pane vashanu vashandisi kugadzira kana kufurira zvisarudzo zvebhizimisi pakambani yavo. Aya vashandisi vane zvakare kaviri simba rekutenga revashandisi vewebhu rese.
Kumakambani eB2B, kushambadza paIncedIn kunogona kuve kwakakwana.
Snapchat ndiye wechidiki mudiki munhau zvemagariro pane iyi rondedzero. Pasinei nekukwikwidza kukwikwidza, Snapchat inochengetedza mushandirapamwe mushandisi.
Kubatsira kwakakosha kwekushandisa Snapchat kune avo vanotarisana nevateereri. Kana bhizinesi rako richida kusvika vadiki milenia (18 kusvika 24) kana Gen Z (13 kune 18), Snapchat inzvimbo yakasarudzika yekuita saizvozvo. Nepo vateereri vekutanga vangave vasina kunge vakakura kunge mamwe maforamu enhau ezvemagariro, ayo anoshanda pamwedzi mushandirapamwe wepamusoro mamiriyoni 300 ichiri yakakura.
Snapchat inopa matatu matatu makuru asi inoramba ichiwedzera. Snap kushambadzira, mafirita uye ma lenses ndizvo zvakajairika uye inozivikanwa Snapchat ads.
Snap ads inoshanda senge mushandisi nyaya. Ivo zvizere-chidzitiro vhidhiyo kushambadzira iyo inoridza kusvika kusvika ku10 masekondi uye inosanganisira kurira. Iwe unogona kuwana imwe yepamusoro-soro yekudzvanya uye kubatanidzwa mitengo ne snap ads.
Mafirita akaratidzirwa zvigadzirwa uye mafomu ayo vashandisi vanogona kuwedzera kune avo mifananidzo. Snapchat mafirita haana kufanana nemafirita emafoto, ayo anochinja maratidziro anoita musoro wemufananidzo. Mafirita anogona kusanganisira yako yemhando yemifananidzo asi inofanirawo kupa chinhu chinonakidza. Snapchat inokurudzira kuumba firita iyo inotora isingasviki 25 muzana yechitokisi.
A subset yemafirita akatsigirwa ndeye geofilters, ayo anoita kuti firita yako iwanikwe kune vashandisi mune yakatarwa radius. Iwe unogona kuseta geofilter yakakomberedza chitoro chako chemuviri, kune rimwe dhorobha, kana parudzi rwese. Diki-diki-diki, mashoma-enguva kushambadzira anonzi pane-inoda geofilters. Nyika geofilters ine akakosha kusvika asi ari kungodhura-anoshanda emhando dzakakura-mhando.
Snapchat lenses ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kufarirwa. Uchishandisa lens, iwe unogona kuwedzera zvinokanganisa kune yako selfie kunge katsi nzeve, hofori mutorwa maziso, kana kana kutendeuka musoro wako wese kuva basketball. Ma lens akachengetedzwa anokurudzira kubatanidzwa munzira ine moyo wakasununguka.
Mutengo we Snapchat ad campaign unosiyana nemhando yemushandirapamwe, asi sarudzo zhinji dzinotanga kumusoro. Runyoro rwekushambadzira nyaya runomhanya pane shoma ye $ 3000 pamwedzi, nepo mafirita nema lens zvinogona kusvika matanhatu manhamba.
Kana nzvimbo yaunonongedzera iri idiki, geofilter inotsigirwa inogona kuva sarudzo inodhura. Snapchat inopomera $ 5 neawa ye 20,000 mativi mativi.
Asi cherekedza zviitiko zvakakosha munzvimbo yako. Kumhanya geofilters ye kana padyo firimu mutambo kana inozivikanwa konzati inogona kukwira kushambadzira mitengo inosvika $20,000.
Snapchat inobvumira kunongedza ne:
Nzvimbo / nyika
Yepamberi yenhamba yevanhu (isingawanikwe munyika dzese)
Mhando dzevashandisi maitiro
Mudziyo wefoni nhare
Kunze kwezvinowanzoitika zvehuwandu hwekutarisira vanhu, Snapchat inokanganisa maitiro evashandisi mumapoka mana akafara: Mararamiro, Vashandisi, Vatariri, uye Vashanyi.
Iyo yeHupenyu mararamiro anosanganisira sarudzo senge vafambi vanofarira uye vatambi. “Vanotenga” vanobva kune vanoenda kuimba yekudyira kuenda kune varidzi vezvipfuyo. "Vanoona" vanogadzirisa mashandisirwo enhau, kuputsa TV nemabhaisikopo mafomu neruoko, nguva, uye network. Chekupedzisira, "Vashanyi" vanovhara vashandisi vanoshanyira nzvimbo dzevaraidzo, mabhangi, kana vatengesi vemotokari.
Chimiro cheSnapchat chinoda kuti vashandisi vaite sekushandisa kwavo app. Ichi chibvumirano chinoshanda kwete kune zvemukati zvemukati chete asi kushambadza. Imwe kambani inoedza Snapchat ads yakawana 10 muzana yekuwedzera mukushandura mareti uye a 15 muzana inowedzera mu ROI (dzoka pakudyara) uchienzaniswa neFacebook ads.
Mhedziso iri pachena? Snapchat ads inoshanda uye inogona kushanda zvakanyanya kusvika vevadiki vateereri.
Nhepfenyuro yezvemagariro evanhu vanogona kunzwa kushamisika. Zvakaoma kuziva kuti ndechipi chikuva chinoburitsa zvakanakisa mhando yako brand, asi heano mashoma matora ekutangisa:
Kana iwe uri mutsva kushambadziro yemagariro Facebook inzvimbo yakanaka yekutanga. Yevazhinji vateereri, yakakura yevateereri inotarisa sarudzo, uye bhajeti rinotyisa rinoita kuti Facebook ive yakanaka Starter chikuva.
Yezve Facebook ads, tanga pano.
Kana iwe uri nyanzvi yezvekutengesa munharaunda mushambadzi, funga nezvekuwedzera yako zano neakakosha maficha pa Twitter uye LinkedIn. Twitter Yakasimudzirwa Matambiro inoita kuti zvive nyore kuitisa hashtag mishandirapamwe, nepo LinkedIn's InMail kushambadzira ichikubvumidza iwe kutora yakasarudzika social media kushambadzira kune inotevera nhanho.
Kutanga kusheta ne Twitter ads or shanyira LinkedIn yevateereri vebhizinesi.
Pakupedzisira, kana bhizinesi rako rakavimba nezvinoonekwa uye vateereri vadiki. Instagram uye Snapchat vanopokana vakasimba. Social media kushambadzira pamapuratifomu aya anogona kuva mutengo, asi ivo vanobhadhara nemitengo yakanyanya kwazvo yekubatanidzwa.
Instagrammers, musoro uku. Kana ramba uine vana pa Snapchat.
Tanga mushandirapamwe mutsva, wedzera zvirongwa zvako zvazvazvino, kana kuti tidza. Social media kushambadzira yave iri imwe yedzakanakisa nzira dzekusvikira vateereri vako. Nezvirongwa zvebhizinesi rega rega, kutanga zviri nyore kupfuura nakare kose.
The post Mutungamiri Wako kuMutambo Mukuru weZviNhau dzeZvaMutambo weChisimusi 5 yakatanga kutanga dlvr.it | blog.
Iyo Yekupedzisira Yekuita Kudzidzisa Masimba Ekubudirira Kwemagariro Ekushambadzira
Zvakawanda Sei Zvinodhura Kushambadzira pa Instagram?
Nhanho-nhanho Nongedzo yekushambadzira pa Instagram
Wepamusoro Pegumi Facebook Kushambadzira Zvirongwa zveBudiriro muna 10
Filed Under: advanced + search + retweet